CUDUR-DAAR JACEYL “Qeybtii todobaad” | WWW.SOMALILAND.NO
dan gar on Daawo muuqaalka shirweynaha…Hamsa Mohamed on Maxaa Inoo Qabsoomay Maxaase I…Ali on Waxan Rajeynayaa in Boolisku a…jamac on Gobolka Sanaag oo xaalad dagaa…Mire on WARGEYSKA GEESKA AFRIKA OO WAR…	CUDUR-DAAR JACEYL “Qeybtii todobaad”
Posted on April 17, 2008 by Abdirisak Fadal	Waa sheeko dhab ah oo ku dhacday Qoraaga sheekada oo ah C/laahi Axmed Caarshe
sababta inoo suura-gelisey is araggeena ii sheeg walaal? Aamina oo ay ka muuqado farxad iyo qosol googoosa ayaa igu tidhi “walaal C/laahiyow haddii aad ogaan lahayd sida aan kuu jecelahay marnaba niyadda ma aad geliseen Aamina ay kuu iman weydey, haddii aan awoodi karayo ama aan jaanis helayo marnaba kaama dul dhaqaaqeen, markastana adaan dhinacaaga taagnaan lahaa, markastana waan kula joogi lahaa, jacaylka aan kuu qabo ayaa walaal iga awood batay, wuuna igu sii fiday, wuxuna igu reebay xusuus iyo wer-wer iyo walbahaar, imikana labadeena aniga ayuu jacaylku igu daran yahay, maalmaalin ayaan kici kariwaayaa oo aan xanuun jacayl la jiifsadaa, sababta keentay in aynu habeen danbe kulano waxa weeye, hooyo ayaa ii ogolaatay in aan masaajid nagu dhow aan ku soo tukado salaadda taraawiixda.
Markaa aniga oo tixgelinaya jacaylka iyo baahiyaha aynu isu qabno oo ay ugu weyntahay is arag la’aantu, waxan xalkeena iyo mustaqbalkeenaba u arkay in aynu ka faa’iidaysano inta Ramadaanta , intaa salaada lagu jiro ayaan wakhtiga kuu soo hurayaa oo aan kuu iminayaa, markaa C/laahiyow sidaa ku bushaarayso, habeen danbena waan kuu imanayaa haddii ALLA ka dhigo sidaa ku seexo oo ku soo toos” aniga oo aad ugu faraxsan kulankayaga ogna sida aanu isugu bohol-yowney ayaan Aamina ku idhi “walaal caawa war fiican ayaad ii sheegtay aad iyo aadna waan ugu faraxsan ahay, kulankeena habeen danbe, koley marka aan ku arkona waan ka sii darayaa oo jacaylku wuu igu sii fidayaa, markaa walaal waxan inoo rajaynayaa kulan xiiso badan, habeenkaasina wuxu inoo noqon doonaa habeen taariikhiya” intaa markii aan Aamina ku idhi ayay hadalkii qaadatay waxayna igu tidhi “waa runtaa C/laahiyow habeenkaa aynu kulanaa wuxu noqon doonaa habeen taariikhiya albaab cusub oo kalena inoo fura, jacaylkana dhinacaaga ka adkay C/laahiyow waxan ka baqayaa in aad jacaylka igu sii deysid, waana inoo habeen danbe haddii ALLA ka dhigo iyo kulan xiiso badan, kolay waan kaa xishoonayaa oo ku eegi-karimaayo, horaa loo yidhi, Indho Is Jeceli Isma Eegi Karaan, markaa C/laahiyow haddii aan indhaha ku siin kari-waayo hayla yaabin, waa iga jacayl” sidaa ayay Aamina hadalkeedii ku soo afmeertay iyada oo afeef sii dhigatay. runtii Aamina waxay ahayd inan aad u xishood badan, anna waxan ahaa wiilkii ugu horeeyey ee Aamina la sheekaysato, weligeedna nin afka uma ay kala qaadin. waxana Aamina ku qanciyey in aanay iga xishoon ee ay igu soo dhiirato, waxayna Aamina igu tidhi “walaal intii karaankayga ah ee aan qajilaada iskaga biin karro waan ku dedaalayaa” habeenkaa Aamina waxanu ku kala seexanay farxad, waxanu ku ballanay habeen danbe iyo goob labada xaafadood u dhexaysa iyo todobadda fiidnimo. Aamina waxay jaanis haysataa muddada gaaban ee salaadda taraawiixda lagu jiro, wixii intaa ka danbeeya waxa looga fadhiyaa guri in ay in yar dib u dhacdona looba ogola. markii ay xilligii aanu balanay ay ku dhowayd ayaan Aamina tilifoon u soo diray, waxanna u tilmaamay goobtii ay iigu iman lahayd, meel kaabad ah ayaan ku idhi waan kuu sii fadhiisanayaa ee iigu kaalay. markii aan imi kaabaddii ayaan ugu imi nin fadhiya, ma kala garanayn in uu cid kula ballamay iyo in kale, mana aan odhan karayn meesha ka kac waayo, waxay ahayd meel dadka ka wada dhexaysa. markii aan ninkii cabaar ku dul wareegay welina aanay Aamina soo muuqan ayaan macmacaale aan sidaa iiga fogayn ayaan sharaab u doontay, markiiba Aamina ayaa goobtii timi iyada oo soo badh tilmaameedsanaysa kaabaddii aan u tlmaamay. Ninba Meesha Bugtaa Isagay Belbelshaa, markiiba waxa niyaddayda ku soo dhacday Aamina oo joobtii timi oo ninkii meesha fadhiyey ku moodey, si dhakhso ah ayaan macmacaalihii uga soo boodey markiiba waxan isha ku dhuftay inan dheer oo qurux badan oo ninkii dultaagan. markiiba waan gartay in ay Aamina tahay, nasiib wanaag markii hore ayaan Aamina tilmaantayda u sheegay xataa maryaha aan soo xidhanayo waan u sii sheegay, tilmaan cad ayay Aamina iga haysatey. si deg deg ah ayaan macmacaalihii uga soo boodey, nasiib darro intii aan soo socdey ayay Aamina ninkii la hadashay iyada oo aniga i moodaysa ayay markiiba ku tidhi, “Salaama calaykum C/laahi” isna wuxu ugu jewaabay “calaykum wa salaam” marnaba Aamina goobta kama filayn cid aan aniga ahayn, markiiba Aamina ninkii il-qoodha ayay ka eegtay waxayna aragtay in aanu lalahayn calaamadihii aan u tilmaamay. Balse iyada oo Aamina ku adkaysanaysaa in aan anigii ahay ayay ninkii ku tidhi “walaal miyaan raagey? Runtii nin af-miisara ayuu ahaa inta uu saacadda uu xidhnaa eegay ayuu Aamina ku yidhi “haa…. Waad yare absaantay” wuu arkay in ay tahay gabadh soo khaldantay, balse markii uu arkay quruxda Aamina ayuu damaaciyey, wuxuna la mid ahaa waraabe godkiisii adhi ugu soo galay. Inta uu Aamina la hadlayo anna waan soo ordayaa, markii aan wax yar u soo jirey ayuu kacay, wucuna Aamina ku yidhi “meesha inaka yare dhaqaaji” markii uu kacay ayay Aamina aragtay in ninkani yahay curyaan. [Laangadhe} uuna yahay nin weyn oo dadii aan u sheekay aad uga weyn yahay. Aamina markii ay aragtay ninkan curyaanka ah ayay naftiiba ka baxday, waxan isa soo barbartaagey Aamina oo ninkii kuleh “waar maxaad beenta iigu sheegtay? Isna uu leeyahay “waxba malaha walaal ee ina mari” markii aan isa soo bar-bartaagey ayay Aamina isoo eegtay aniga oo aan la hadlin ayay igaratay, markii ay aragtay in aan C/laahi ayay igu soo boodey, markii aanu isku salaanay salaan xanbaarsan kalgacal iyo naxariis ayay Aamina isku dayday in ay ninkii oo halkan taagan, oo aan weli quusan in ay la dagaalanto. Balse aniga ayaa ku qanciyey in ay faraha ka qaado, waxanna ku idhi “walaal Aamina inaka daa waa nin curnaana’e ee inaka mari” intii aanaan halkii ka dhaqaaqin ayay Aamina oo inta ay xishood ka qabto, indhaha I siin karila, indheheedana ay ilmo ku soo taag-taagantahay ayaa halkii iiga qaaday hees qurux badan oo ay iigu muujinayso in jacaylku ka dhab yahay, sida aan anigu jacaylka ugu abuuray, waxsayna ku bilowday sidan.
Filed under: Somaliland « WARAYSI AANU LA YEELANAY MAAMULAHA DUGSIGA HOOSE EE DIINI-GOOBAALE MR.MUSTAFE XASAN YUUSUF Allaybaday, Gobolka Hargeisa. 17.April.2008 Wararka Wargeyska OGAAL, cadadkii Maanta, Khamiis, 17 April »